Knowing Your Business during Economic Recession — Balance Professional Services
Knowing Your Business during Economic Recession
စီးပွားရေးပျက်ကပ်မှာ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအခြေအနေမှန်ကို သိဖို့ရာ
နိုင်ငံ စီးပွားရေးကျဆင်းချိန်မှာ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအခြေအနေမှန်ကို သိဖို့ရာဘာတွေလုပ်ရမလဲ?
SWOT Analysis ဆိုတာက စီးပွားရေးဗျူဟာတွေ ရေးဆွဲနဲ့နေရာမှာ အထောက်အကူပြုတဲ့ Analysis နည်းပါ။ စီးပွားရေးတစ်ခု စတင်တည်ထောင်ရာမှာ အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက် စာဖတ်သူ အများစုကတော့ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ မသိသေးတဲ့သူများအတွက်လည်း အောက်မှာ အကျဥ်းချုပ်ရှင်းပြထားပါတယ်။ SWOT ဆိုတာ လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ Strength (အားသာချက်)၊ Weakness (အားနည်းချက်)၊ Opportunities (ရရှိလာနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ)၊ Threats (ခြမ်းခြောက်လာနိုင်တဲ့အရာတွေ) ကို လေ့လာစမ်းစစ်တဲ့ သဘောပါ။ ဒီတော့ ဒါတွေ စမ်းစစ်ပြီးသိတော့ဘာလုပ်မလဲ?
• Building On Strength (S) မိမိအားသာချက်ကို အုတ်မြစ်ထားပြီး လုပ်ငန်းကို တည်ဆောက်ပါ
• Minimizing Weaknesses (W) မိမိအားနည်းချက်ကို သေးနိုင်သမျှသေးအောင်လုပ်ပါ
• Sizing Opportunities (O) ရလာတဲ့အခွင့်အလမ်းများကို မိမိရရ ဆုပ်ကိုင်ပါ
• Counteracting Threats (T) ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုများကို အကောင်းဆုံးတုန့်ပြန်နိုင်အောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ။
SWOT Analysis ကစီးပွားပျက်ကပ်ကြုံလာတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်နိုင်စေရန် တိုးတက်ရန်လိုအပ်သော နေရာများကို မီးမောင်းထိုးပြပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကို အကြပ်အတည်းကြားမှာတွေ့လာနိုင်ချေရှိတဲ့ အခွင့်အလမ်းများကိုလည်း ဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။
Financial Analysis (ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေ စမ်းစစ်လေ့လာခြင်း)
အကောင်းဆုံး Financial Management ဆိုတာက ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ Strategic Goals တွေပေါ်မူတည်ပြီး လုပ်ငန်းရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးကို စီမံခြင်း၊ ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အချိန်တစ်ခုကြာတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်သက်မှတ်ခဲ့တဲ့ Financial Plan တွေဟာ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ ပုံမှန် Review လုပ်ခြင်းကို ပြောတာပါ။ လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ Financial Analysis လုပ်ဖို့ဆိုရင် အရင်ဆုံး ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ လက်ရှိ Profit & Loss, Balance Sheet နဲ့ Cash Flow တွေကို စီစစ်ပိုင်းခြားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းကို ထိခိုက်စေနိုင်လောက်တဲ့အထိ ရောင်းအားကျသွားစေတဲ့ Product တွေကိုရှာဖွေပါ။ ပြီးရင် သူတို့ကြောင့် လုပ်ငန်းရဲ့ Financial Performance ကိုဘယ်လောက်ထိခိုက်စေနိုင်သလဲဆိုတာကို စဉ်းစားပါ။ အဖြေရှာပါ။
Assess Business Performance (လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် အကဲဖြတ်ခြင်း)
လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ခြင်းသည် အမြဲလုပ်နေရမည့် Process တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အပ်ဖြင့် ထွင်ရမည့်နေရာတွင် ပုဆိန်နှင့်ပေါက်ရမည့် အဖြစ်မျိုးတွေ ဖြစ်မလာစေရန်နဲ့ ပြဿနာများကို အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်နိုင်စေရန်လည်း ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ Business Performance တွေကို Assess လုပ်ရန်အတွက် အောက်ပါနည်းလမ်းများကနေ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
Review your Business Plan (ကိုယ့်ရဲ့ Business Plan ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ခြင်း)
Business Performance ကို Assess လုပ်ခြင်းရဲ့ ပထမဆုံးအဆင့်က Business Plan ကိုပြန်လည်သုံးသပ် (Review) တာပါပဲ။
Review လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း Financial Statements တွေ Management Statements (မန်နေဂျာတွေကပြောတဲ့ ငွေရေးကြေးရေးမပါပဲ အခြားဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာ) တွေကို ကြည့်မှ လုပ်ငန်းတွင်း မှာ လုပ်ငန်းစဥ်ပိုင်းရော ငွေရေးကြေးရေးပိုင်းရော ဘာတွေဖြစ်နေလဲ ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရမှာပါ။
စီးပွားရေး ကြပ်တည်းနေချိန်တွင် ကိုယ့်ရဲ့ Business Plan ကို Review နဲ့ Updade လုပ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံး တုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းကို ထိခိုက်စေနိုင်မယ့် ပြဿနာများကို အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနိုင်ရန် SWOT Analysis နဲ့ Financial Analysis တို့ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
• Financial Analysis လုပ်တဲ့အခါမှာ အဓိက အရးကြီးတဲ့ Key Factors တွေကတော့
• Cash Flow တွေ၊ Revenue တွေနဲ့ အသုံးစရိတ်/ကုန်ကျစရိတ်တွေ
• Product တွေ၊ Service တွေရဲ့ လက်ရှိရောင်းအားတွေ
• ကုန်ပစ္စည်းအဝင်အထွက်များ၊ လက်ကျန်စာရင်းများ
• ပေးရန်ရှိ၊ ရရန်ရှိများကို Review လုပ်ခြင်း
Financial Ratios ဆိုတာက Financial Statements တွေပေါ်မှာ အခြေခံတွက်ချက်ထားတဲ့ အချိုး/ Ratios တွေဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ မတူညီတဲ့ အချိန်တွေမှာရှိတဲ့ Performance တွေကို နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ သုံးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ Performance နဲ့အခြားလုပ်ငန်းတွေရဲ့ Performance တွေကို နှိုင်းယှဉ်တဲ့ နေရာတွင်လည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။
ဒီတော့ အပေါ်မှာ ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ အရာတွေကို ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ အခြေအနေမှန်ကို သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်နေ့တွေမှ Financial Ratio အမျိုးပေါင်း ၂၀ ကျော်ကိုရှင်းပြပါဦးမယ်။
ထက်ခိုင် (Business Development), ရဲရင့် (Client Success)
Htet Khaing Hla Soe October 16, 2018
Business AdviceHtet Khaing Hla Soe October 16, 2018 Business Management
Accounting Advise to Business Owners 1
AccountingHtet Khaing Hla Soe October 15, 2018 Accounting, Business Advice